Wayyaanee fi Ummata Sa´aati 24 Paaltokii Irra ta´uu - Caboowanci.com-Oromia
November 17, 2017 November 17, 2017 Nadhani	0 Comments Ethiopia, OLF, OMN, Oromia
Oromian Hardhaas Borus olaanitumman Amanitaa Keessumootaa fi Olaantummaa Wayyaanee (TPLF) raawwateefii jira. Oromon diina isaafi firaa isaa addaan baafachuu dadhabee otuu hin taanee hardha boru fooya´iiminni ni dhufa waldanda´uu amaleefatee kan obsaan bira darbaa tureedhaa. Akkuma hayyuun Oromoo tokkoo dhubataniiti Oromoon Seeraa 30 ( Soddoma) Qaba jedhan. Si´aa 10 ni obsa, si´aa 10 ni gorsa akkasumas sia´aa 10 ni dhokissa. Dhugaa dhumati dhimma kana yoo balidhinaafii gad faggeenyaan kan ilaalitan kan ta´ee kun hundaa ta´ee jira.
Kan Mootummaan Wayyaanee TPLF Ba´aa guddaa taatee jirtuu irraa moo Oromoota ta´aanii ba´aa guddaa Oromoo irrati xaxaa jiran bayyachuu isaati. Isaan keessayyis namoonni Mursaasii Amantaa dahoo godhachuudhaan faallaa Seeraa fi Aaddaa Oromoo hin taanee akkasumas dagaaginna Amanitaa Oromoo alaa kan ta´ee yeroo ammaa kana Adunyaa kana hunkuraa jiru Oromia keessati gad dhaabuuf jechaa halkaniif guyyaa dhama´aafi maalaqa guuraa turan. Kana hundaa ifa ifati waan hojatanii ummanni irraa beeku tokko hin jiru. Garuu moo maqaa jijirataniifi harka lafa jalaatin waan isaan karoorfataniifi hojjatan hundaa irraa gahamee jira.
Karroori isaanii maqaa Oromia bilisoomitte jedhuun kan socho´aniif bara dheeraadhaaf Amanitaan isanii akka cunqurfamaa dhufee dubatuu. Gaafa Oromia bilisoomitte moo dhaaba Amanitaa Isaanitiin kan durfamuu Seera ittin bulmaataa Oromia irrati murteessuuf kan qopha´aa turaniidha.
Mootummaan wayyaanee illee kan sababa godhatee bira dhiiraadhaaf waan hin jirre, Oromia fi Ummata Oromoo bakka bu´uu kan hin dandeenyee maqaa Teerarsitii Ummata Oromoo irrati mogaafitee Oromoon hundaa akka Teerarsitii ta´eefi Oromoon hunda Amantaa kana akka qabu fakkeessuudhaan haqa Oromo awwaalanii amma hardhaati fira dhabinnee garbummaa galatti hafinne sababa kanaatiin.
Abbaan fedhee waan fedheeti amanuun mirgaa isaa otuu ta´ee jiru, Aadaan Oromoo fi Seenaan Oromo akkasumas Afaan Oromo laggachuudhaan Amanitaa Ormaa fi Afaan Ormaa bakka jiranitti dagaagisuudhaaf hirba ykn boqonnaa dhabaa jiru. Dhugaadhumati enyuu iyyuu Amanitaa mataa ofii qaba. Garuu ani gaafan isa na Umee sanatti Amanuu akka inni naacaala huminna qabuun amana malee, inni maqaan isaa arrabissameedhaaf ykn abarameedhaaf, lola ykn jeequmissa sababiin kaasuuf hin jiru. Egaa inni uumaa ta´ee inni ofiif haa falmatuu! Inni ofii diina isaa haa waraanattu!
Ati enyuu hardhaa rabbi bakka buutee isaaf falmituuf? Inni huminna dhabeetti? Ati rabbiif falmuu ykn du´uu dhiisitii ofii keetuufuu waan sirraa eegamuu hojjatee maatii kee jiraachisuu hin dandeenye. Ala kana teessee tola Intarteetii (interent) tola argateen Paaltokii ( Paltalk) irrati sa´aati 24 teessee Oromo bahaafi dhihaa kaabaafi kibbaa wal dhabsiisaa jirta. Issaayyuu Paaltokii naminni siif banee. Ofii keetiif baratee otuu nama taatee, Baratee Otuu saba kee deegartee, Baratee Otuu maatii kee gargaartee, baratee otuu dhaaba guddaa tokko otuu umintee, Barateefi hojjatee dhaaba kaamiphaanii Oromoo hundaan itti gargaramuu dalaguu dhiisiteet Amanitaa duri Fashiinii ta´ee bira darbe fi Amantaa garboomfataa qabatee Sabaaf Saba wal ficcisiisuuf Interneetii irra teessee Oromia diiguuf dalagaa jirta.
Inni baratees hardha iji isaa fi gurii isaa dhaaba Amanitaa kanaan maramee fi itti dukanaa´ee jira. Mala ummani Amanitaa Ofin jiraachuu danda´an birsiisuu irraa Amanitaan tokko akka qaama Oromo hundaati fudhachuun sadarkaa mirga biraa dhiibuu irra gahanii jiru. Yaadadhaa! Amma fedhee abbaan fedhee illee yoo baratee ilaalicha Amanitaa ofi keessa qaba taanaan Meshaan Samuu issaa tokko akka jalaa cabee beekaa. Deemee deemee gaafa tokko boolla isaa hin mallee keessati gaafa of ajjeesuufi ummata ajjeesuu argtuu! Akkasumas biyyi Amantaa handhuura fi ittin bulmaata godhatee tokko, biyya nagaafi fayyaa qabiduu taatee hin beekituu. Tarii amma tokko yoo maalaqa qabaatan itti jiraachuufi yeroo eegachuu ni danda´uu garuu biyya bulichuu, waan tokko umuu, namaaf yaaduu, walqixumaadhaan jirachuu fi Samuu nagaa qabu tokko isaan keessa hin argitan.
Kanaaf Amantaa dahoo godhatanii Oromia bilisoomuu gesse tokko nu harkaa keessa baasa jirtu. Wagaa 27/28 darbee Sanas dogogora umameen ABOn biyya lakkisee baheen amma hardhaati gabirummaa galatti afinnee. Hardhas Ummanni Oromoo kuma dhubaa ol lubbuu isaanii itti dhabani, lafee isanii itti caccabisanii, mana hidhaa wayyaanee keessati dararan irra gahee hundaa itti hardhaa Oromian Sadarka amma irra jirtuu irra geesse. Kun moo otuu kanaan jiruu Ummanii ala jiru kun ( Ummani Jaanja´ee) qabissoo bakka tokkoti umuu dadhabee maqaa wal irrati baassee, dhaabillee Amanitaa meetirii 100 dhibba irrati Amanitaa fi naannoo naannodhaan wal ijaaree waan jinnii irrati dalagaa jira. Kana qofa mitti Oromia Amanitaa alaa dhufee jalatti galchuuf hawwaa jira.
Sababa kanaan kan ka´ee yeroodhaaf maqaa isaanii dhahuun kan hin barbachifinnee, Sodaa Amantaa kana irraa kan ka´ee, Oromo isa Amanitaa kana hin hordofineef jechaa Saba biraa faana hariiroo waliif tumissuu irratifii biyya tokko ijaaruu irrati fuula isanii gargalichanii jiru. Kun moo kara tokkoon waan nama jajabeesuu ta´uu illee, gara biraatiin Oromoon Aaddaa boodatii hafaa fi Amanitaa Alaa nutti galeen gargar baanee, tokko ta´uu dhabinnee Saba biraa faana fuula walitti naanessuun kun ammam akka miidhaa jiru of haa gaafannu. Kun otuu ta´ee jiru Sadarkaan Oromoon amma irra jiru boonsaa otuu ta´ee jiru, qabissoo Oromoo xumura irra gahee otuu jiruu Sababa Amanitaa kanaan jechaa waliigaltee biraa uumuun kun dhuminni keenyaa maal ta´aa kan jedhu fi akka wagoota 27/8 darban sana akka hin taanee irrati hojjachuun barbachisaadha. Gara fuunduraatiis yoo ta´ee Sababa namoota xixxiqqoo Amantaa leelissanii Oromia gara biyya bira fakkeessuu irrati dalaganiifii sababa wagaa 27 hundaa bilisummaa dhabinnee maqaa hin qabinne ykn bakka nu bu´uu hin dandenyee nu baasisan wayyaaneetti aannee itti gaafatama jalaa akka hin baanee hunduu beekuu qaba!
← Baaddimmee Lafa Dhagaaf Lubuun 100,000
Waajjirri Xiyyarii Itiiyyoophiyyaa Gurguramee →